အစာလည်းဆေး | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label အစာလည်းဆေး. Show all posts
ရာသီသွေးဆင်းများတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ နံနံစေ့ပြုတ်ရည်ကို သောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်။ နံနံစေ့ပြုတ်ရည်က သွေးသွန်တာများတာကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သလို သွေးဆင်းမများတော့အောင်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နံနံစေ့မှာ သံ ဓာတ်များစွာပါဝင်မှုက သွေးအားပြန်လည်ဖြည့်တင်းရာမှာ အထောက်အကူပေးနိုင်သလို အားအင်ပြန်လည်ပြည့်လာစေပါတယ်။
နံနံစေ့က အင်ဆူလင်လုပ်ဆောင်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သလို သွေးတွင်းသကြား ဓာတ်ပမာဏကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။ နံနံစေ့အမှုန့် ဒါမှမဟုတ် နံနံစေ့အစိမ်းကို ဟင်းတွေ၊ ဟင်းရည်တွေ၊ သနပ်တွေ၊ အချိုရည်တွေနဲ့ ဟင်းအနှစ်တွေထဲမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ နံနံစေ့အမှုန့် ၁၀ ဂရမ်ကို ရေ ၁၀ ဆနဲ့ရောပြီး တစ်ညထားကာ သောက်သုံးပေးလို့လည်း ရပါတယ်။
ကဏ္ဍ သဘာဝဆေးဝါးများ, အစာလည်းဆေး
လူတွေ မသိသေးတဲ့ ဂျင်းရဲ့ ကောင်းခြင်း ၁၀ မျိုး
ဟင်းချက်ရာတွင် အသုံးပြုလေ့ ရှိသော ဂျင်းသည် ဟင်းချက်ရာတွင် သာမက အခြားသော နေရာ များတွင်လည်း ဆေးဖက် ဝင်ပုံများကို ရေးသား လိုက်ရပါတယ်။
Original link - http://www.yoyarlay.com/
မြန်မာ့ ဆေးဖက်ဝင် ကြံဟင်းပင်
မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ပေါက်သည်။သဘာဝ အလျောက် ပေါက်ရောက်သည်။
၁ ။ အညွန့်ကို ကြက်ရိုးနှင့်သော် လည်းကောင်း ၊ တင်ကျီးရိုးနှင့် သော် လည်းကောင်း ဟင်းချို ချက်သောက် ပါက ဆီးအောင့် ဆီးချုပ်ရောဂါနှင့် အခြား ဆီးနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါများ ပျောက်၏ ။ အေးအောင် ပြုသော ဆေးဘက်တွင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။
♥ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတိုးပွါးစေရန် Like,share, ,Credit ပေးခြင်းဖြင့်လည်းကူညီနိုင်ပါသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, August 07, 2015 No comments:
မာလကာသီး အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Psidium Guajava ဟု သိပ္ပံ အမည်ရသော မာလကာပင်တို့ ကို မြန်မာပြည်တွင် နေရာ့ အနှံ့ အပြား ဆိုသ လို ပေါပေါ များများ တွေ့မြင်ကြရပြီး၊ မာလကာသီးကို မစားဖူးသေးတဲ့ သူတော့၊ မရှိလောက်ဘူး ဟု ထင်ပါသည်။ အမျိုး အစားပေါ် မူတည်၍ မာလကာသီး၏ အတွင်း ပိုင်း အသားသည် အဖြူရောင် (အူဖြူသီး) နှင့် ပန်းရင့်ရောင် (၀ါ) ကြက်သွေးပျော့ ရောင် (အူနီသီး) ဟူ၍ ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။
လတ် ဆတ်ေ သာ အသီး၏ အသားမှာ ချို၍ ကျွတ်ဆတ်ကာ ရနံ့ လဲ မွှေးပါတယ်။ အသီးမှည့် သွားသော အခါ၊ အတွင်း ထဲရှိ အသားမှာ ပျော့အိကာ ပိုချိုပြီး၊ ပိုလဲမွှေး လာပါသည်။ အသီးထဲတွင် အလွန်မာသော အစေ့လေး များ စွာ ပါရှိပြီး၊ ကျေညက် အောင်ဝါးစား ပေးရပါသည်။ အပေါ်ယံ အခွံသည် အစိမ်းဖျော့ / ရင့် ရောင် နှင့် စိမ်းဝါရောင် တို့ ဖြစ်ခါ၊ ထိုအခွံကိုလဲ စားလို့ ရပါ သည်။
မာလာကာသီးများကို သူ့ ချည်းဘဲ သက်သက် အဆာပြေ၊ အချိုပွဲ အဖြစ် စားလေ့ရှိပြီး၊ အခွံနွှာ ရေခဲစိမ်ကာ၊ ဆား၊ နွယ်ချို မှုန့် တို့ ဖြင့် လူးနယ် စားကြ ပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် “မာလကာ” ဟူသော နာမ် အတိတ်ကို အဓိပ္ပါယ် ယူကာ ကျန်းမာရေး ကောင်း မွန်စေရန် အတွက် မာလကာပင် အညွန့် လေးများကို ဘုရား ပန်းအိုးတင်၍ အဆောင် လက်ဖွဲ့ သိမ်း ထားကြ သလို၊ မာလကာသီးဖြင့် ဘုရား၊ သံဃာတော် များကို သစ်သီး ဆွမ်းကပ် လှူ လေ့ ရှိကြပါသည်။
မာလကာသီး နှင့် မာလကာရွက်တို့ ၏ကျန်းမာရေး
မာလကာသီးသည် လူသားတို့ ကျန်းမာရေးကို အထောက် အကူပြု စေသော အာဟာရဓာတ် များဖြင့် ပြည့်နှက်နေ သည်ကို သင် သိပါသလား? ဥရောပ နှင့် အာရှတိုက် များတွင် “ မာလကာသီးကို တစ်ကြိမ်သာ ဖမ်းဆုပ်စား၊ ဆရာဝန်ကို တစ်နှစ်လုံး ရှောင်ရှား” ဟု ဆိုရိုး စကား ရှိကြပါသည်။ အသီးသာ မက၊ အရွက်၊ အစေ့နှင့် အခွံတို့ ကလဲ အလွန်ဆေးဘက် ၀င်ပါသည်။
မာလကာသီးထဲတွင် ဘေးဥပါ သ်ဖြစ်ေ စသော ကိုလက်စထရော နှင့် ဆိုဒီယမ် တို့ လုံးဝ မပါရှိသည့် အပြင်၊ ကယ်လိုရီနှင့် အဆီ ဓာတ် အနဲငယ်သာ ပါရှိပြီး၊ အမျှင်ဓာတ်လည်း ကြွယ်ဝသောကြောင့် ကျန်းမာရေးကို များစွာ အထောက် အကူ ဖြစ်စေပါသည်။ လိမ္မော် သီးထဲတွင် ပါရှိသော ဗီတာမင်စီ် ထက် ၅-ဆ ပိုမို ပါဝင်သောကြောင့် မာလာကာသီး သည် ဗီတာမင်စီတို့ စုဝေးရာ အရင်း အမြစ် ဖြစ်ပါသည်။
၁၀၀-ဂရမ် အလေးချိန်ရှိသော မာလာကာသီး ထဲတွင် ဗီတာမင်အေ ၂၅၀ I.U၊ ဗီတာမင်ဘီ (ခေါ်) သီအာမင် ၀.၇ မီလီဂရမ်၊ နီအာစင် ၁.၂ မီလီဂရမ်၊ ဗီတာမင်စီ ၃၀၂ မီလီဂရမ်၊ ကယ်လ်စီယမ် ၃၀ မီလီဂရမ်၊ ဖော့စဖရက် ၂၉ မီလီဂရမ်၊ ကစီဓာတ် ၁၇.၁ ဂရမ်၊ ပရိုတင်း ၁ ဂရမ် နှင့် ကယ်လိုရီ ၇၀ ခန့်ပါရှိပါသည်။
(၁) ဆီးချိုရောဂါ။ မာလကာသီးကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရှိ The University of Allahabad တွင် ဆေး သုတေသနပြု စမ်းသပ်ခဲ့ရာ၊ မာလကာသီး ၏ အခွံသည် သွေးထဲရှိ သကြား ပမာဏကို မြင့်တက်စေနိုင်သော်လဲ၊ အသီး အတွင်းထဲရှိ အသားနှင့် အစေ့တို့ က သွေးထဲရှိ ဂလူးကို့ စ် ပမာဏကို ချပေးနိုင်စွမ်းရှိ သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ထို့ ကြောင့် ဆီးချိုရောဂါ ဝေဒနာသည် များသည် မာလကာ သီးကို အခွံဖယ် စားပေးခြင်းဖြင့် ကောင်းကျိုးပြု စေပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် မာလကာရွက်ကို တိုကျိုမြို့ ရှိ The Yakult Central Institute for Microbiological Research တွင် ဆေး သုသေသန ပြုလုပ်ခဲ့ရာ၊ မာလကာ ရွက် ကို ရေနွေးကြမ်းဖြင့် လက်ဖက် ခြောက်လို ခတ်သောက် ပေးခြင်းဖြင့် အင်ဆူလင် ပမာဏ ပြောင်း လဲခြင်း မရှိဘဲ၊ သွေးထဲရှိ alpha-glucosidase အင်ဇိုင်းများကို ထိထိ ရောက်ရောက် ဟန် တားပေး သောကြောင့် ဆီးချိုရောဂါ ဝေဒနာသည်များ ယုံကြည် စိတ်ချစွာ သောက် သုံး သင့်ကြောင်း အကြံပြု ထားပါသည်။
(၂) ၀မ်းလျော / ၀မ်းကိုက်ခြင်း။ မာလာကာသီး ထဲတွင် အစာချေ စံနစ်ကို တိုးတက် ကောင်းမွန် စေသော ဗိုက်တာမင်စီ၊ ကယ်ရို တီနွိုက်စ် နှင့် ပိုတက်စီယမ်တို့ပါရှိသည့်ပြင်၊ အူကလီစာ တစ်ရှုးများကို ကောင်း ကျိုးပြုသည့် astringents ဓာတ်ပေါင်းစုတို့ အ မြောက်အများ ပါရှိ ခြင်းကြောင့်၊ အူထဲရှိ မကောင်းသော ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကို သေစေနိုင်ခြင်း၊ အလွန် သေးငယ်သော ရောဂါ ပိုးမွှားများကြီးထွား လာမှု ကို တားမြစ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ အူထဲရှိ ပိုလျှံသော အချွဲအကျိများကို ဖယ်ရှားသန့် စင်ပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အစွမ်း သတ္တိ များကြောင့် ၀မ်းလျော ၀မ်းပျက် ရောဂါ၊ ၀မ်းကိုက် ရောဂါ၊ အစာအ်ိမ်နှင့် အူယောင်တင်းခြင်း တို့ ကို ကောင်း စွာ ကုသပေးနိုင် ပါသည်။ မာလကာရွက်ကို ရေနွေးကြမ်း ခတ်သောက် ပေးခြင်းဖြင့်၊ အူကို အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေသည့် ပိုးမွှား များကို ဟန်တား ကာကွယ် ပေးသောကြောင့် ကာလ၀မ်းရောဂါ မဖြစ်စေပါ။ အော်ဂလီဆန် ပျို့ အန် ခြင်းများ ကိုလဲ သက်သာ စေပါသည်။
(၁၀) အရေပြားပြသနာများ။ နိုင်ဂျီးရီးယား ရှိ Federal University of Technology တွင် လေ့လာစမ်း သပ်ချက်များအရ၊ မာလကာ ရွက်တွင် ဗက်တီးရီး ယား ပိုးမွှားများကိုသေစေနိုင်သည့် အစွမ်းသတ္တိပါ ရှိနေခြင်းကြောင့်၊ (က) ခွဲစိပ်ထားသောဒဏ် ရာများကို ပိုးမ၀င်စေ ရန်၊ (ခ) အရေပြားပေါ်ရှိ ကူးစက် ယား နာများကိုပိုးသေစေရန်နှင့် (ဂ) အသားအရေပေါ်တွင် ပွန်းပဲ့ရှနာထိ ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပါက သွေး တိတ် ပြီး အနာမြန်မြန်ကျက်စေရန်...စသည်တို့ အတွက်၊ မာလကာရွက်ကို ရေစင်စင်ဆေးကာ ကျိတ်ေ ချပြီးအုံပေးနိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင် သွေးဆိပ်တက်၍ခန္ဓာကိုယ်ယားယံခြင်းအတွက် မာလကာ ရွက်ကိုရေစိမ်ပြီး ချိုးပေးရပါသည်။ ဦးရေပြားပေါ်တွင် ဒက် ပေါက်ခြင်းနှင့် ဆံပင်သား များခြော က်သွေ့ ခြင်းတို့ အတွက် မာလကာရွက် သတ္တုရည်ဖြင့် လိမ်းကျံပေးနိုင်ပါသည်။ မာလကာ ရွက်ထဲ တွင် ဗီတာမင်အေ ပါရှိခြင်းကြောင့်လည်း ဆံသားရင်းမြစ်များကို သန်မာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနို င်ပါသည်။ ကျန်းမာ သန့် ရှင်းသော ခန္ဓာကိုယ် အသား အရေကို ပိုင်ဆိုင်လိုပါသလား။ လွယ်လွယ်ေ လးပါ။ မာလကာရွက်နုများနှင့် အမှည့်မလွန် လတ်ဆတ်သောမလာကာသီးတို့ ကို ရြော ပုတ် ၍၊ နေ့ စဉ်ရေချိုးပေးခြင်းဖြင့် သင့်အသားအရေပေါ်ရှိ အဆ်ိပ်အတောက် များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး၊ စိုပြည်လှပလာပါလိမ့်မည်။
မာလကာသီးဖြင့် မိမိအိမ်တွင် Lotion ပြုလုပ်နည်း
(က) မာလကာသီးသည် သွေးချုပ်စေတတ်သောကြောင့်၊ ရာသီသွေးအဆင်းလွန်သူများ မှန်မှန်မှီဝဲ စားသုံးပေးသင့်ပါသည်။ သို့ သော် ပုံမှန်ဓမ္မတာလာသူများ နှင့် ဓမ္မတာမမှန်သူများအဖို့ရာသီလာစဉ် မာလကာသီးလုံးဝမစားသင့်ပါ။
(ခ) မာလကာ သီးအခွံ သည် အနည်းငယ်ဖန်၍၊ အ ခွံနွှာ စားကြပါသည်။ လူအချို့ ကလည်း အစေ့ကအူအတက်ပေါက် စေနိုင်သည် ဟု ထင်မှတ်မှားနေကြ ပါသည်။ တကယ်တော့ မာလကာသီး၏ အသားထက်၊ အခွံနှင့် အစေ့တို့ က ကျန်းမာရေးကို ပိုမို အကျိုးပြုစေသော အစိပ်အပိုင်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ ကြောင့် အခွံနှင့်စေ့တို့ ကိုပါ ညက်ညက်ဝါး၍ စားပေးသင့်ပါသည်။
(က) မာလကာသီးသေးသေးကျစ်ကျစ်တို့ သည် အဖန်ဓာတ်အလွန်များပြီး၊ ချောင်းဆိုးသ လိပ် ပွစေတတ်သဖြင့် ထို အသီး မျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
(ခ) အပေါ်ယံအခွံပြောင်တင်းပြီး၊ အပြစ်အ နာဆာကင်းသော အသီးတို့ ကိုသာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ။ (ဂ) မာလ ကာသီးတို့ သည် ခူးဆွတ်ပြီး သည့်ေ နာက် တဖြည့်းဖြည်းမှည့်လာတတ်သည့်သဘောရှိသည့်အတွက်၊ အခန်းအပူချိန်မှာ ထားပေး သင့်ပါသည်။ ၄င်းတို့ သည် အပူဓာတ်စာ အသီးဖြစ်လို့ ၊ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်း မထား သင့်ပါ။
သင်ကံကောင်းပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သဘာဝတရားကြီးက၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် သစ်သီး ၀လံရောင်စုံတို့ဖြင့် လူသား တို့ကျန်းမာရေးကို တစ်ဘက်တစ်လမ်းမှ အထောက် အကူပေးထားပါ သည်။ ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပ ၂-ဌာန အတွက် သဘာဝဆေးစွမ်းတို့စုဝေးရာ၊ စိမ်းရောင်ခြယ်မာလ ကာ သီး ၏အစွမ်းကို အထက်ပါအတိုင်းတွေ့ မြင်ကြ ရပါပြီ။ ဈေးနှုန်း ချိုသာပြီး၊ ပေါပေါများများ ရရှိနိုင်သော မာလကာသီးကို လက်လွတ် မခံသင့်ပါကြောင်း လက်တို့ ၍ ပြောလိုက် ရပါသည်။
Original link - https://www.facebook.com/lugyan.gyi.12
(၂) မျှစ်တွင် ဖီနောလစ်အက်စစ် များစွာပါဝင်မှုကြောင့် ရောင်ရမ်းမှုလျော့ကျပြီး အင်တီအောက်ဆီးဒင့် အစွမ်း ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် နှလုံးရောဂါ အပါအဝင် နာတာရှည် ရောဂါများကို လျော့ကျစေသည်။ မျှစ်တွင် ပါဝင်သည့် ပိုတက်စီယမ် မှာ နှလုံးကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေသည်။
(၃) မျှစ်တွင် ဖိုင်ကိုကမ်မီကယ် များစွာပါဝင်သည့်အတွက် ဖန်းဂတ်စ်မှိုတား အာနိသင်၊ ဘက်တီးရီးယား ဆန့်ကျင်သည့် အာနိသင်နှင့် ကင်ဆာတား အာနိသင်တို့ ရှိသည်။
(၄)မျှစ်တွင် ပိုက်တက်စီယမ် ပါဝင်လည်း များသည့်အတွက် သွေးတိုးကို ကျစေ သည်။ မျှစ်တစ်ခွက်တွင် တစ်နေ့တာ လိုအပ်သည့် ပိုတက်စီယမ် ပမာဏ ၏ ငါးပုံတစ်ပုံ ပါဝင်နေသည်ဟု သိရသည်။
(၅) မျှစ်သည် မကောင်းသည့် ကိုလက်စထရော အဆီ (LDL) ကို လျော့ကျစေ ပြီး ကယ်လိုရီပါဝင်မှု လျော့နည်းခြင်းကြောင့် အဝလွန်သူများနှင့် သင့်တော် သည့်အပြင် အမျှင်ဓာတ် ပါဝင်မှုများပြီး မကြာခဏ ဆာလောင်မှု လျော့နည်းနိုင် သည့်အတွက် ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းနေသူများ စားသုံးရန် အထူးသင့်တော် သည်။
(၈)မျှစ်စားသုံးခြင်းဖြင့် ရာသီစက်ဝန်းကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ရာသီမှန်မှန် လာစေသည်။
(၉)မျှစ်ကို သည်းခြေအိတ်ဝေဒနာများ လျော့ကျစေရန် အိမ်သုံးဆေး တစ်လက် အနေဖြင့် ယခင်က အသိပြု ခဲ့ကြပါတယ်။
(၁၀)မျှစ်ရည်ဟာ ဒဏ်ရာငယ်များကို သန့်စင်စေသည်။ သန့်ရှင်းသည့် မျှစ်ရည် အား ဒဏ်ရာအပေါ် လိမ်းပေးပါက အနာကျက်မြန်စေသည်ဟု တချို့က ယုံကြည်ကြသည်။
Original link - https://www.facebook.com/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, July 11, 2015 No comments:
သွေးအတွင်း အဆီတိုး လာသော ဓာတ်ကို Cholester ဟု ခေါ်သည်ကို ခေတ်မှီ သူတိုင်း သိကြပြီး ဖြစ်သည်။ Cholesterol များလာလျှင် သွေး တိုး၊ နှလုံးနှင့် လေဖြတ် ရောဂါတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ အနည်းဆုံး လူဝ လာပြီး အသည်း အဆီဖုံး ရောဂါဖြစ် လေ့ရှိသဖြင့် လူတိုင်း ကြောက်ရွံ့သော ဓာတ်တိုး ရောဂါ ဖြစ်ပြီး ဝလာ သူတိုင်း ခြောက်လ တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးကြည့်ရန် ဆရာဝန်ကြီး များကလည်း ညွှန်ကြား ကြသည်။
ကြက်သွန်ဖြူ စားလျှင် Cholesterol ကျစေသည်ဟု လူသိ များသော် လည်း နောက်ပိုင်း သုတေသန ပြုချက်များ အရ မသေချာဟု ဆိုသည်။ ထင်ထား သလောက် မကျဟု ဆိုသည်။ တိုင်းရင်း ဆေးပညာ ဘက်မှလည်း သုတေသန ပြုသည့် ဓာတ်ခွဲ ခန်းများ ထူထောင်ပြီး ခေတ်မှီ သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသန ပြုလုပ်ကာ Cholesterol ကျစေသည့် အပင်များကို စမ်းသပ် ရှာ ဖွေလျက် ရှိသည်။
မြန်မာ့ မြေပေါ်တွင် ပေါက်ရောက်သည့် လက်တစ်ကမ်းမှ ဆေးဘက်ဝင် အပင်များ၊ အရပ်သုံး ဆေးမြှီးတို အဖြစ် ရောဂါ ပျောက်ကြောင်း နာမည်ကြီး သည့် ဆေးပင်များ ရှိသည်။ ထိုထဲမှ Cholesterol ကျစေည့် ဆေးဖက်ဝင် အပင်မှာ 'ဝါးပင်' ဖြစ်သည်။
ဆေးပင် သုတေသန ပြုချက်များ အရ ဝါးပင်မှ ဝါးရွက်သည် သွေး အတွင်းရှိ Cholesterol ကို ကျစေသော Hypolipidaemic Activity ပါရှိ ပါသည်။ ဝါးရွက် လက်တစ်ဆုပ် စာမှ ရရှိသော သတ္တုရည် ကော်ဖီဇွန်း နှစ်ဇွန်းကို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် (သို့မဟုတ်) ဝါးရွက် ပြုတ်ရည် အကြမ်း ပန်းကန် တစ်ဝက်ကို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် သောက်သုံး ပါက Cholesterol ကို သိသာစွာ ကျဆင်းစေ သည်။ (ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန တိုင်းရင်း ဆေးပညာ ဦးစီးဌာန၊ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ လထုတ် လက်တွေ့ အသုံးချ ဆေးဖက်ဝင် အပင်များ ပေါင်းချုပ် စာအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၆၅ဝ မှ) ဝါးပင်သည် မြန်မာ့ တောတောင် များတွင် သဘာဝ အလျောက် ပေါက်ရောက်သော အပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးပင် အဖြစ်လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ သမပိုင်း ဥတုတွင် ပို၍ ဖြစ်ထွန်းသည်။
''ငှက်ပျော ကဆုန်၊ ဝါးနယုန်'' ဟု ဆိုသဖြင့် မိုးတစ်ပြိုက် နှစ်ပြိုက် ရွာချသည့် နယုန်လတွင် ဝါးကို စိုက်ပျိုးနိုင် သည်ဟု ရှေးလူကြီးများ အဆို ရှိသည်။
ရုက္ခဗေဒ အဆိုအရ ဝါးပင်အမျိုး ပေါင်း ၂ဝဝ ကျော်မျှ ရှိသည်။ အသုံးများသော လူသိများသော ဝါးမျိုးများ မှာ ကြခတ်ဝါး၊ ထီးရိုးဝါး၊ ဝါးနက်၊ ဝါးပိုးဝါး၊ ကြသောင်းဝါး၊ တင်းဝါး၊ သိုက်ဝါး၊ ဝါးဖြူ၊ မြင်ဝါး၊ ရွှေဝါး၊ ဝါးမင်း၊ ဝါးယား၊ ဝါးကောက် တို့ဖြစ်သည်။ ဝါးပင်မှ အစို့ ထွက်လာသည့် မျှစ်မှာ မြန်မာတို့ အကြိုက် အစား အစာဖြစ်သည်။ မျှစ်ချဉ် အဖြစ်လည်း အချဉ် တည်၍ စားကြသည်။ ဝါးပိုး မျှစ်ချဉ်ကို လူကြိုက် အလွန်များသည်။
ဝါးပင်ပေါက် မျှစ်စို့များသည် အပူ ဓာတ်ရှိသည်။ အစာအိမ်ကို အစာချေရည် ထွက်စေရန် လှုံ့ဆော်ပေး နိုင်သည်။ အစာစား ချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ် စေ၍ အစာ စားပြီး ချိန်တွင်လည်း အစာကြေ စေနိုင် သဖြင့် နာတာရှည် ခံတွင်းပျက် သူ၊ နှုတ်မမြိန် ရောဂါ ရှိသူများ မျှစ်ကို ချက်ပြုတ် စားခြင်း ဖြင့် ရောဂါသက် သာ စေနိုင်သည်။
မျှစ်ကို အနာပေါက် ဆေးကု ရာတွင် အသုံးပြု ပုံမှာ မျှစ်ကို သတ္တုရည် ညှစ်ပြီး အနာပေါ်တွင် လောင်း၍ အဝတ်ဖြင့် တစ်နာရီခန့် ပတ်စည်း ထားလျှင် ပိုးတွယ်သော အနာကိုပင် သန့်စင် စေသည်ဟု ရှေးဆေးကျမ်း များတွင် တွေ့ရ သည်။ ထိုနည်းတူ ဝါးရွက် တစ်မျိုးမျိုးကို ပြုတ်၍ အနာ ဖန်ဆေးခြင်း ပြုပေးလျှင် အနာ အကျက် မြန်စေနိုင်သည်။ အသားနုတက် စေသော ဖန်ဆေးဖြစ်သည်။
ဝါးရွက်သည် သွေးဖောက်ပြန်သော ရောဂါ၊ အပူငုပ်နာ များကို နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ရှေးမြန်မာ များသည် မီးဖွား ပြီးနောက် သားအိမ် အတွင်း မှ သွေးဟောင်း သွေးပုပ်များ ကင်းစင်စေရန် ဝါးရွက်ဖြင့် ချွေးအောင်း၊ ချွေး ထုတ်ခြင်း ကို ပြုလုပ် ပေးကြသည်။
ဆေးကျမ်းများ အဆိုအရ ကြခတ်ဝါးရွက် (သို့မဟုတ်) ဝါးရွက် တစ်မျိုးမျိုး လက်တစ်ဆုပ် စာကို ကြိတ်ချေ၍ ပြုတ်ပြီး လက်ဖက်ရည် ပန်းကန် တစ်လုံး ခန့် သောက်ပါက သွေးအန်၊ သွေးကျရောဂါ၊ မီးယပ်သွေးချုပ် ရောဂါ ပျောက် ကင်းသည်။ ကလေး မွေးပြီး သူများ နို့ရွှင်ဆေး အဖြစ်လည်း တိုက်ကျွေး ကြ သည်။
ဝါးရွက်သည် ရှာဖွေရ လွယ်ကူပြီး အဆိပ် အတောက်လည်း ကင်းသော အရွက်ဖြစ် သဖြင့် အဆီ တိုးပြီး ဝလာသူများ အနောက်တိုင်း နည်းဖြင့် သွေး စစ်သော အခါ တက်နေ သူများ သောက်သုံး သင့်ကြောင်း ဆေးသုတေသနမှ အတည်ပြု ထားသည်။
ဆီးအတွက် လက်တွေ့ ပျောက်တဲ့ ဆေး တစ်ခွက်ပါ
ဆီးသွားတဲ့ အခါ နာကျင်ခြင်း မပြီး သလို အောင့်ခြင်း ပြီးခါနီး နာကျင်ခြင်း ဆီးသွားတဲ့ အခါ အဖြူ အဖတ်လေး လိုလို အခဲ အနည်းငယ် ပါကာ သွားတဲ့ အခါမှာ အောင့်ခြင်း အလုပ် ပျက်အောင် နာကျင် နေပါက လိုအပ်တာ လေးက မခက်ခဲ ပါဘူး။
သကြား အနည်းငယ်ပဲ လိုပါတယ်
ကြက်သွန်နီ ကိုနွှာပြီးမှ ရေမဆေးရ ပါးပါးလှီးပြီး သကြား အနည်းငယ် ထည့်ပေါ့။ ထည့်ပြီ ရေနွေး ပူပူလေး ထည့်ပြီး ခဏ အုပ်ထားပါ။ ပူနွေးနွေးလေး အရည်း သောက်လိုက်ပါ ကြက်သွန်ဖတ်တွေ မစားရ အရေ သောက်ရုံနဲ့ နေ့ခြင်း ပျောက်ပါတယ် ခဏခဏ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ယုံယုံ ကြည်ကြည် သောက်ကြည့်ပါ တစ်ကယ် လက်တွေ့ ပျောက်ပါတယ်။ အိမ်မှာ ဖြစ်တိုင်း သောက်လေ့ ရှိပါတယ် စေတနာ အမှန်ပါ။
ဒုတိယ အကြိမ် တင်ပါတယ်။
အနည်းငယ် ညီးစော်လေး နံပါတယ် ထိရောက်မှု အပြည့်ပါ သကြားကို အချိုကြိုက် ပါက ပိုထည့်လဲ ရပါတယ် ပုံမှာပြ ထားပါတယ်။
Original link - https://www.facebook.com/profile.php?id=100008398094989
ကျောက်ကပ် ဝေဒနာသည်များ ၀မ်းမြောက်ဖွယ်
ကျောက်ကပ် ဝေဒနာ ခံစားနေ ရသူများမှာ လူလည်း ပင်ပန်း၊ ငွေကြေး ကုန်ကျမှု များပြားသော ရောဂါ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သိန်း ထောင်ချီ၍ ချမ်းသာသော သူပင် ဒေ၀ါလီ ခံ ရသော ရောဂါပါ။
Original link - https://www.facebook.com/profile.php?id=100008780193566&fref=photo
အကြောဆိုင်း လေဖြန်း ရောဂါများ အတွက် ဆေးကောင်း တစ်လက်
အဲဒီလို ရောဂါတွေ ခံစားနေ ရပြီ ဆိုရင် အခုဖော်ပြမဲ့ ဆေးနည်းလေးက သက်သာ ပျောက်ကင်း စေမှာပါ။ ဦးဇင်း ကိုယ်လဲ ဦးဇင်းနဲ့ ပတ်သက် ဆက်နွယ်နေတဲ့ ဒကာကြီးတွေ ဒကာမကြီး တွေ ကို ဆေးနည်း ပြောပြပြီး သုံးစွဲဖို့ တိုက်တွန်း သလို ကြုံတဲ့ အခါမှာလည်း ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ဖော်စပ်ပေး ခဲ့ပါတယ်။
အမြဲလိုလို ညောင်းညာ ကိုက်ခဲ နေသူများဟာ တစ်ပတ်လောက် ပုံမှန် စားလိုက်တဲ့ အခါ ညောင်းညာ ကိုက်ခဲ မှုတွေ ပျောက်ကင်းပြီး နောက်ထပ် ပေါ်မလာ တော့ကြောင်း ဝမ်းသာ အားရ လာပြီးပြော ကြပါတယ်။ အကြော ဆိုင်းနေ သူများနဲ့ လေဖြန်းနေ သူများက ကလည်း တစ်လ နှစ်လ စသည် အားဖြင့် ဖော်စားလိုက် ခဏ နားလိုက်နဲ့ သုံးစွဲ လိုက်လို့ သက်သာ ပျောက်ကင်း ကြောင်းဝမ်း သာအားရ ပြန်ပြော ကြပါတယ်။
ဆေးနည်းလေး ကတော့ ------
၂။ သက်ရင်းကြီး ရွက်ရယ် (၎င်း အပင်မှာ ဒေသတိုင်းတွင် ပေါက်လေ့ ရှိပါသည်)
ဒီနှစ်မျိုးပဲ လိုအပ် မှာပါ။
၃။ ပြီးလျှင် အိုးထဲ ထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်မှာ ၆ - နာရီကြာ ပြုတ်ရ ပါမည်။ (၆-နာရီ ဆိုငြားလည်း ဦးဇင်းကတော့ နှစ်ရေပွက်ပြီး ဖိုပေါ်မှာ မီးအေးအေးနဲ့ပစ်ထား လိုက်ပါသည်)
စားပုံ စားနည်း ကတော့ ----
ပြုပ်ပြီးသား အထုပ်လေးကို အပေါ်က ဖက်တွေ ပြန်ခွာ ငှက်ပျောသီး ကိုလည်း အခွံခွာပြီး အတွင်းသားကိုသာ မနက် တစ်လုံး ညတစ်လုံး တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် စားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ ဆေးနည်းကို မိမိအား တစ်ဆင့် မျှဝေ ပေးခဲ့ ပါသော သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ အရှင်ဝိစိတ္တ (ကျွန်ုပ်တို့ အခေါ်"ဦးဝဲကျော်") စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ပံ့သကူ ချောင်အား အထူးကျေးဇူး တင်ပါကြောင်း.....
Original link - https://www.facebook.com/ven.visuta.7
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, June 17, 20152comments:
နှမ်းဆီ၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
နှမ်းဆီကို ဟင်းချက် ရာတွင် သုံးသည့် အပြင် အာဟာရဓာတ် ပြည့်ဝမှု၊ ရောဂါ ကာကွယ်နိုင် မှုနှင့် ရောဂါ ပျောက်ကင်း စေနိုင်သည့် အစွမ်းများ ကြောင့် တိုင်းရင်းဆေးများ ထုတ်လုပ် ရာတွင်လည်း အသုံးပြု ကြ သည်။
နှမ်းစေ့ များတွင် အိုမီဂါ - ၆ အက်စစ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပြီး ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင် ပစ္စည်းများ၊ ဗီတာမင်များနှင့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေး ဇူးများစွာ ပါဝင်သည့် အစားအစာ ဆိုင်ရာ အမျှင် ဓာတ်တို့ ပါဝင်သည်။
နှမ်းဆီတွင် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ ကြွယ်ဝစွာပါဝင် သောကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ၊ အသက်အရွယ်အိုမင်းလာမှုနှင့် ဘက်တီးရီးယားများကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ၊ သွေးကြောများထဲတွင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအများစုကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။
နှမ်းစေ့တွင် ပါဝင်သော ဓာတ်တစ်မျိုးက အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေသော၊ ထိခိုက်စေသော အရာများနှင့် အရက်သောက်ခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများကို ချေဖျက်ပေးခြင်းဖြင့် အသည်းလုပ်ဆောင်ချက် ကောင်းမွန်စေရန် အထောက်အကူပြုသည်။
နှမ်းဆီက အမျိုးအစား-၂ ဆီးချိုရောဂါသည်များ သောက်သုံး သော ဆေး၏အာနိသင်ကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ကြောင်း ၂၀၁၁ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ သိရသည်။
နှမ်းဆီတွင် ဗီတာမင်အီးနှင့် ဗီတာမင်ဘီတို့ ပါဝင်သောကြောင့် အရေပြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို လျော့ကျစေနိုင်ပြီး နုပျို၊ တောက်ပ သည့် အသားအရေမျိုး ဖြစ်ပေါ်စေရန် အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
သွေးကြောများ၊ အရိုးများနှင့် အဆစ်နေရာတို့တွင် အားအင်နှင့်ဆန့်နိုင်ကျုံ့နိုင်မှုတို့ကို ပေးစွမ်းသော ပရိုတိန်းဓာတ်အတွက် အရေး ပါသည့် ကြေးနီဓာတ်လည်း နှမ်းဆီတွင် ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် နှမ်းဆီက အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းမှုနှင့် နာကျင်မှုအချို့ကို လျော့ကျ စေနိုင်သည်။
နှမ်းစေ့များက သွားပိုးစားခြင်း၊ သွားဖုံးမှ သွေးထွက်ခြင်း၊ လည်ချောင်းခြောက်သွေ့ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် အစွမ်းသတ္တိ ရှိပြီး သွားများ၊ သွားဖုံးများနှင့် မေးရိုးတို့ကို အားကောင်းစေနိုင်သည်။နှမ်းဆီအနည်းငယ်ကို ရှူပေးခြင်းဖြင့် နှာခေါင်းနှင့် လည်ချောင်း တစ်လျှောက် ရှင်းလင်းသွားနိုင်ပြီး ရင်ကျပ်ခြင်းကို သက်သာစေနိုင် သည်။ ဆံပင်ကို နှမ်းဆီလိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ဗောက်ထခြင်းကို ကာကွယ် နိုင်သည်။ နှမ်းဆီသောက်ခြင်းဖြင့် သွေးပေါင်ကို လျော့ကျစေနိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဆိုဒီယမ်ဓာတ်ပမာဏကိုလည်း လျော့ကျစေနိုင် သည်။
နှမ်းဆီတွင်ပါဝင်သော ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်က အရိုးထိခိုက်မှု ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ခေါင်းကိုက်သက်သာစေကာ သွေးမဆုံးမီ ရောဂါလက္ခဏာတို့ကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။
နှမ်းဆီကို ပုံမှန်သုံးစွဲပါက စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် တင်းမာမှုတို့ကို လျော့ကျစေနိုင်ပြီး အာရုံကြောစနစ်ကို အားကောင်းလာစေကာ မောပန်း နွမ်းနယ်မှုနှင့် အိပ်မပျော်နိုင်ဖြစ်ခြင်းတို့ကို သက်သာစေသည်။
နှမ်းစေ့များတွင် အားကောင်းသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း တစ်မျိုးပါဝင်သောကြောင့် ကင်ဆာဆဲလ်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။
နှမ်းစေ့များတွင် အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်သဖြင့် အစာချေဖျက်မှုစနစ် အတွက် ကောင်းမွန်ပြီး ကလေးငယ်များကို နှမ်းဆီဖြင့် နှိပ်နယ်ပေး ပါက ကလေးငယ်ကြီးထွားမှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ပြီး အိပ်ပျော် စေရန် အထောက်အကူပြုသည်။
နှမ်းဆီတွင် ပါဝင်သော မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်က ပန်းနာရင်ကျပ် ဖြစ်ခြင်းကို သက်သာစေပြီး သွေးတိုးခြင်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ကာ သွေးကြောများပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
Original link - http://7daydaily.com/story/38922
ကဏ္ဍ သဘာဝဆေးဝါးများ, အစာလည်းဆေး, အစားအစာ
Original link - http://blog.irrawaddy.org/2015/05/blog-post_27.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, May 27, 2015 1 comment:
အဆီ ဆိုတာ လူ့ခန္ဓာ ကိုယ်နဲ့ ကျန်းမာရေး အတွက် မကောင်းဘူး ဆိုပေမယ့် အဆီ အက်ဆစ် တမျိုးဖြစ်တဲ့ Fatty Acid ကတော့ ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြု ပါတယ်။ ဒီ အက်ဆစ် ဓာတ်ဟာ စိတ် ဖိစီးမှုကို လျော့ကျ စေခြင်း၊ အဆုတ်ရဲ့လုပ်ဆောင် မှုကို ကောင်းမွန် စေခြင်း၊ သွေးတွင်း အဆီကို လျှော့ချ ပေးခြင်း၊ အဆစ် အမြစ် နာကျင် ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာ စေခြင်းတို့ အပြင် သက်ကြီး သတိ မေ့လျော့ ရောဂါတွေ ဖြစ်တဲ့ Alzheimer နဲ့ Dementia တို့ မဖြစ် အောင်လည်း ကာကွယ်ပေး ပါသတဲ့။
အဲဒီလို အကျိုးများ လှတဲ့ Omega3Fatty Acidကို ဖြည့်စွက် ဆေးဝါးတွေ သောက်ခြင်းနဲ့ အလွယ် တကူ ဖြည့်စွမ်း မှီဝဲနိုင် ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အဲဒီလို ဖြည့်စွက် ဆေးဝါးတွေ မှီဝဲတာ ထက်ပဲ သဘာဝ အစားအသောက် တွေကို စားသုံးဖို့ ကျွမ်းကျင် သူတွေက အကြံပြု ပါတယ်။
Omega3Fatty Acidဟာ ပင်လယ်ငါးတချို့မှာ ပြည့်ဝစွာ ပါရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အထက်ပါ ရောဂါ ပြဿနာတွေကို ကာကွယ်လိုရင် ငါးများများ စားသင့် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆာဒင်းနဲ့ မက်ကရယ်လို ငါးသေတ္တာ ငါးတွေစားပါ၊ ဆယ်လ်မွန် ငါးစားပါ၊ တူနာငါး စားပါ၊ ပင်လယ်ငါး သလောက်စားပါ။
Original link - http://blog.irrawaddy.org/2015/05/blog-post_89.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, May 25, 2015 No comments:
အခုချိန်က သရက်သီးတွေ စပေါ်ချိန် ဖြစ်တာမို့ အချိန် အခါနဲ့ ကိုက်ညီအောင် အလှအပ စိတ်ဝင် စားတဲ့ ပျိုမေတို့ အတွက် သရက်သီးရဲ့ ကောင်းကျိုး လေးတွေ မျှဝေ ပေးလိုက် ပါတယ်။
သရက်သီးမှာ ဗီတာမင်စီ၊ ဗီတာမင်အေနဲ့ သက်စောင့် ဓာတ်တွေ ပါတာ မို့ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံး ကျန်းမာရေး အတွက် ထောက်ကူ ပေးပါ တယ်။
အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခု အနေနဲ့ သရက်သီးဟာ သွေးကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာ၊ အူနဲ့ ပရော့စတိတ်ကင်ဆာရောဂါတွေ မဖြစ်ပွားနိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အသားအရေအတွက်ဆိုရင် လည်း ၀က်ခြံတို့၊ အသားအရေ မွဲခြောက်တာတို့၊ အစက်အပြောက် တို့၊ အရေးအကြောင်းတို့ စတာ တွေမဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေး တဲ့အပြင် သရက်သီးကို အနှစ် လုပ်ပြီး သဘာဝမျက်နှာသစ်ဆေး ဖန်တီးကာ မျက်နှာသစ်ပေးရင် လည်း မျက်နှာအသားအရေ ကြည်စင်ဝင်းပပြီး အရွယ်တင် နု ပျိုစေပါတယ်။
ဒါတွေတင် ဘယ်ကမလဲ။ ဆံသားမကောင်းလို့ စိတ်ညစ် နေသူတွေအတွက်လည်း သရက် သီးက ကူညီနိုင်ပါသေးတယ်။ သရက်သီးမှာပါတဲ့ ဗီတာမင်စီက ဆံပင်သားတွေခြောက်ပြီး အ ရောင်မှိန်တာတွေ မဖြစ်အောင် ထောက်ကူပေးပါတယ်။ သရက် သီးအနှစ်ကို သဘာဝဆံပင်ပျော့ ဆေးအဖြစ် သုံးပေးရင် ဦးရေပြား ခြောက်တာ၊ ဆံပင်ကျွတ်တာ၊ ဗောက်ထတာတွေကို ကာကွယ် နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ စားရင်စား သလို အကျိုးများတဲ့ သရက်သီး ကိုကျန်းမာလှပရေးအတွက် အကျိုးရှိရှိ သုံးကြရအောင်ပါ။
Original link - http://7daydaily.com/story/37772
ကိုယ်တွင်း အဆိပ် အတောက်တွေ ရှင်းချင်တယ် ဆိုရင်
အရွယ်တင် နုပျိုစေဖို့၊ ခန္ဓာ ကိုယ်အား ပြန်ပြည့် စေဖို့နဲ့ နိုးကြား တက်ကြွနေ စေဖို့ အတွက် ခန္ဓာ ကိုယ်တွင်း အဆိပ် အတောက် တွေ ဖယ်ရှားပေးဖို့ လိုအပ် လာပါ တယ်။ ဒီလို ဖယ်ရှား ရာမှာ ဟင်း သီး ဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီး ဖျော်ရည် လတ်လတ် ဆတ်ဆတ်သောက် တာ အန္တရာယ် အကင်းဆုံးဖြစ် တာမို့ ဘယ်ဖျော်ရည် တွေက ကောင်းကျိုး ပြုတယ် ဆိုတာ မျှဝေ ပေး လိုက်ပါတယ်။
လတ်ဆတ်တဲ့ ပန်းသီးဖျော် ရည်မှာ ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင်ဂုဏ် သတ္တိနဲ့ အာဟာရ ဓာတ်တွေ ပါဝင် ပြီး ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းကို သန့်စင် ပြီးသား ဖြစ်စေ ပါတယ်။ ရေကတော့ အစာ ခြေဖျက်အား ကောင်းစေပြီး မကောင်းတဲ့ အမှုန် အမွှားနဲ့ အဆိပ် အတောက် aတွကို အစာခြေ လမ်းကြောင်း က တစ် ဆင့် ဖယ်ရှား aပးတဲ့ အရိုး ရှင်းဆုံး သဘာဝ ဆေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် တစ်ခုက မုန်လာဥနီ(ဗီ တွတ်) ဖျော်ရည် ဖြစ်ပြီး သတ္တု ဓာတ်၊ ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင် ဂုဏ် သတ္တိ တွေနဲ့ ဗီတာမင်တွေ ပါဝင် တာကြောင့် အသည်းကို သန့်စင် စေတဲ့ အပြင် သွေးအား နည်းတာ ကို ပုံမှန် ဖြစ်စေကာ ကိုလက် စထရော အဆင့်ကိုလည်း ထိန်းညှိ ပေးနိုင် ပါတယ်။
သံပရာ ရည်မှာပါတဲ့ ဆီထရစ် အက်စစ်က အစာခြေမှု၊ ချက်မှု အတွက် ထောက်ကူ သလို ကင်ဆာ ဖြစ်စေတဲ့ အဆိပ် အတောက် တွေကို ဖယ်ရှားပေး တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မုန်လာဥနီ ဖျော်ရည် မှာလည်း ဗီတာမင်အေ နဲ့ သတ္တု ဓာတ်တွေ ပါဝင်ပြီး အစာ မကြေ တာတွေ၊ ဝမ်းချုပ် တာတွေ နဲ့ အူတွင်း ကပ်ပါး ကောင်တွေကို ဖယ်ရှား ပေးပါတယ်။
လတ်လတ် ဆတ်ဆတ် လိမ္မော်သီး ဖျော်ရည် ကလည်း သတ္တု ဓာတ်နဲ့ ဗီတာမင် တွေကြွယ် ဝစွာ ပါဝင်ပြီး ကိုယ်တွင်း ဆဲလ် တွေ မပျက် စီးအောင် ကာကွယ် ပေးနိုင် စွမ်း ရှိပါတယ်။
လက်ဖက်စိမ်း (ဂရင်းတီး) ဟာ ဆိုရင်လည်း ကင်ဆာနဲ့ အခြားသော ရောဂါတွေ မဖြစ်ရ လေအောင် ကာကွယ် ပေးတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒေါက်ခွရွက်၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနဲ့ ကိုက်လန် လိုမျိုး ဟင်းရွက် စိမ်းတွေကို ဖျော်ရည် လုပ် သောက်နိုင် သလို ဟင်းသီး ဟင်းရွက် စုံနဲ့ သစ်သီးစုံ ဖျော်ရည် ပျစ်ပျစ် (Smoothie) တွေက လည်း ခန္ဓာ ကိုယ်တွင်း အဆိပ် အတောက် တွေကိုဖယ်ရှားပေး နိုင်ပါတယ်။
မူရင်းလင့် - http://7daydaily.com/story/36745#.VUyJxZNlJ2I
ကဏ္ဍ ကျန်းမာရေးဆောင်းပါး, သဘာဝဆေးဝါးများ, အစာလည်းဆေး
လက်တွေ့ သားအိမ် ကင်ဆာဖြင့် ရန်ကုန် ဆေရုံကြီးမှာ စစ်ဆေးပြီး နောက်ကျမှ လာသည်ဟု သတ်မှတ် ပြောဆိုခြင်း ခံရသူ အသက် ၅၀ ကျော် အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦး- လက်တွေ့ ပျောက်ကင်း သွားသည် ဆိုသဖြင့် တိုက်ကြီးမြို့ အဝင် တာဂွရွာမှ သတင်းပျံ့ ပြီး တစ်ဆင့် စကား ကြားသိ ရသဖြင့် ကံ တိုက်ဆိုင် သူများ ပျောက်ကင်း ကြစေရန် တင်ပြ အပ်ပါသည်။
( ပေးပို့သူ။ ဆရာကြီး ဦးသောင်းဌေး။ တာဂွရွာ အလယ်တန်း ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီး)
ကင်ဆာ ဝေဒနာ ခံစားနေ ရသူ။ သင်္ဘောသီး။ သင်္ဘောရွက်ကို နေ့စဉ် သုံးစွဲပါ။ေ ဆးမီးတို ဆိုပြီး အထင် မသေးပါနှင့်။ အစာဟောင်း အိမ် အူမကြီးမှာ ကင်ဆာ အလုံးတွေ့၍ ဖြတ် ထုတ် ရမည့်သူ တစ်ဦး။ ငွေကြေး မတတ်နိုင်၍ ဆရာကြီး တစ်ဦး နည်းပေး သဖြင့်သင်္ဘောရွက် ပြုတ်အရည်သောက်ခြင်း။ အရွက်နုကို တို့စရာ လုပ်စားခြင်းဖြင့် မခွဲရပဲ၊ ဝမ်း လည်း ပြန် သွားနိုင်ကာ ၂နှစ် ကျော်ပြီ။ အသက်ရှင် နေပါသည်။
သင်္ဘောသီး ကြက်ဥပြုပ်သည် ရေမထည့်ပါ။ သင်္ဘောသီးထဲမှ အငွေ့ အာနိသင် ဝင်ပြီးကြက်ဥ ကျက်သွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သင်္ဘောသီး အငွေ့ကြောင့် ကြက်ဥသည် ကင်ဆာ ပိုးကို သတ်နိုင် ပါသည်။ ကြက်ဥမှ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး ထုတ်နေ သည်ကို ကြားဘူး ကြပါ လိမ့်မည်။ ကြက်ဥ တစ်နေ့ တစ်လုံး စားပေး သင့်သည်ဟု ယခု အခါ ကျန်းမာရေး ဆရာဝန်ကြီး များက ညွှန်ကြားလျှက် ရှိနေ ကြသည်။
သဘာဝ အိမ်မွေး ကြက်ဥများက ပို၍ အာနိသင် ကောင်းပါသည်။
အိမ်မွေး ကြက်ဥက အလုံးသေး သဖြင့်ဈေးကွက် မဝင်ပါ။
သင်္ဘောသီး အစိမ်း ထိပ်မှ ဖြတ်ပါ။
အတွင်းမှ အစေ့များကို ခြစ်ပါ။ အခေါင်း ကျယ်စေ ဖို့ပါ။
အစေ့များကို ဖယ်မပစ်ပါနှင့်။ အခေါင်းတွင်းသို့ ကြက်ဥ ထည့်ပါ။
အလုံးကြီးလျှင် ကြက်ဥ ၂လုံး အထိ ဆန့်ပါသည်။
အဖုံးကို ပြန်အုပ်ပြီး အစေးဖြင့် ဖိကပ်ပါ။ မသေချာလျှင် ရွှံ့ဖြင့် ဇော်မံပါ။
မီးဖို။ မီးကျီးဖြင့် နာရီဝက်ခန့် ဖုတ်ပါ။
ဖွင့်ကြည့်လျှင် သင်္ဘောသီး အတွင်းမှ အခိုးများ ထွက်လာ ပါလိမ့်မည်။
အတွင်းမှ ကြက်ဥကို အပြင်ထုတ်ပြီး အအေးခံ ထားပါ။
ကြက်ဥ ၂လုံးကို အခြား အစာနှင့် မရောပဲ ထမင်းလွတ် စားပါ။
နေ့စဉ် အနည်းဆုံး ၁၄ ရက်စားမှ အကျိုး ထူးပါမည်။
( ကြောင်းကျိုး တိုက်ဆိုင် သူများ ပျောက်ကင်း ကြပါစေ။)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, April 30, 2015 1 comment:
အမျိုးသမီးများ သွေးဆုံး ချိန်တွင် စားသုံး သင့်သော အစား အစာများ
အမျိုး သမီးများ သွေးဆုံး ချိန်တွင် ပြဿနာများ မကြုံတွေ့ စေရန် အထောက် အကူ ဖြစ်စေမည့် အစား အစာများကို လမ်းညွှန် ပေးလိုက် ပါသည်။
သဘာဝ ဆန်၊ ဂျုံ၊ ပဲ၊ ပြောင်းများ၊ သစ်သီး များနှင့် ဟင်းသီး ဟင်းရွက် များတွင် ပါဝင်သော အမျှင်ဓာတ်က ခန္ဓာ ကိုယ်ထဲရှိ ကိုလက်စထရော၊ သွေးထဲ ဂလူးဂို့စ် ပါဝင်မှု တို့ကို လျှော့ ချ ပေးနိုင်ပြီး ၀မ်းချုပ်ခြင်း မရှိအောင် ကာကွယ် ပေးကာ သွေးဆုံး ချိန်တွင် ကြုံ တွေ့ရမည့် အခြားသော ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ အားလုံးကို ကာကွယ် ပေးနိုင်သည်။
တစ်နေ့တာအတွက် ကယ်လ်စီယမ် ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းများ စားသောက်ပေးခြင်းက သင်၏နေ့စဉ် အစားအသောက်မှ လုံလောက်သော ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်ရရှိစေမည်ဖြစ်သဖြင့် အရိုးအားနည်းသော ရောဂါဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ် ကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။
ပဲများစားပေးခြင်းဖြင့် သွေးဆုံးချိန် စိတ်ကယောက်ကယက်ဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့ ရောဂါလက္ခဏာများကို လျော့ကျစေနိုင်ပြီး ပဲတွင် အမျှင်ဓာတ်များစွာလည်း ပါဝင်ကာ တို့ဟူးအမျိုးအစားအချို့တွင် ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်ပါဝင်သည်။
အနီရောင် အသားများ၊ ကြက်သား၊ ငါး၊ ဥများ၊ အစိမ်းရောင် ဟင်းရွက်များကဲ့သို့ သံဓာတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများကို စားပေးခြင်းဖြင့် သွေးနီဥ နည်းပါးနိုင် မှုကို လျှော့ချ ပေးနိုင် သည်။
သွေးဆုံးချိန်တွင် စိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်ခြင်းများမှာ အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး ဖြေရှင်းရခက်နိုင်သဖြင့် ဗီတာမင်ဘီနှင့် အိုမီဂါ-၃ ကဲ့သို့ ဗီတာမင်များ ပို၍ စားပေးသင့်သည်။
အသား၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ အခွံမာသီးများ၊ ပဲစေ့များကဲ့သို့ ပရိုတိန်းဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်သော အစားအစာများ စားပေးခြင်း ဖြင့် ရောဂါကူးစက်မှုများ၊ ဆေးကုသမှု ခံယူခြင်း တို့မှ ပြန်ကောင်းလာစေရန် အထောက်အကူပြုသည်။
ဆဲလ်များကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးရန်၊ အသားအရေစိုပြည်စေရန် နှင့် ခန္ဓာကိုယ်မှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးရန် သွေးဆုံးနေသော အမျိုးသမီးများ ရေလုံလောက်စွာ သောက် ရန် အရေးကြီးသည်။ ထို့ပြင် ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များ၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် ပစ္စည်းများနှင့် အမျှင်ဓာတ် များစွာ ပါဝင်သော သစ်သီးများနှင့် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များ စားပေးသင့်သည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, April 06, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ ကျန်းမာရေး, သဘာဝဆေးဝါးများ, အစာလည်းဆေး, အစားအစာ
ကင်ဆာ ဝေဒနာ ရှင်တို့ အတွက် အစွမ်းထက်သည့် ကျောက်သဗြက် ကုထုံး
မြန်မာတို့၏ တိုင်းရင်း ဆေးပညာသည် အာသောက မင်းကြီး ကိုးတိုင်း၊ ကိုးဌာန သာသနာပြု မစေလွှတ်မှီ ကတည်း ကပင် ပျူခေတ် ဆေးပညာ၊ ဗိဿနိုးမြို့ တည်ချိန်မှ စတင်၍ ပေါ်ပေါက် နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သမိုင်း မှတ်တမ်း များက သက်သေ ခံလျှက်ရှိ လေသည်။
ထိုမြန်မာ့ ဆေးပညာနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရပ် ဆိုင်ရာ ကျမ်းပေါင်း (၃၆၈) ကျမ်း ရှိကြောင်း၊ ပိဋကတ်တော်လာ သမိုင်းနှင့် ပညာရပ် ဆိုင်ရာ ကျမ်းများ ဦးရေ စာရင်းတွင် ဖော်ပြ လားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ဆေးကျမ်းများ အလိုအရ တိုင်းရင်းဆေးများ ဖော်စပ်ရာတွင် ဒေသထွက် သစ်ဥ၊ သစ်ဖု၊ ဆေးဖက်ဝင် သစ်ပင်၊ သစ်နွယ် အဖူး၊ အပွင့် များကို အဓိကထား
ဖော်စပ်လေ့ ရှိကြသည်။ နွယ်မြက် သစ်ပင်တို့ သည်ကား ဆေးဖက် ၀င်လှ ပါသည်။
အလားတူ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်း နေရာဒေသ အနှံအပြားတွင် အလေ့ကျ ပေါက်ရောက်သည့် သဗြက်ပင် (CAYRATIA) သည် အံ့သြ ဖွယ် ကောင်း လောက်
အောင် အစွမ်းထက် လှပါသည်။ ၄င်းသည် တောထဲတွင် အများဆုံး ပေါက်ရောက် သဖြင့် အချို့က တောသဗြက်ဟု မှတ်တမ်း တင်ကြသည်။
ထိုအပင် များသည် ဟင်္သာတမြို့၊ ရပ်ကွက်ပေါင်း (၂၂) ရပ်ကွက်တို့တွင် အလေ့ကျ ပေါက်ရောက် လျှက်ရှိကြောင်း၊ သစ်ပင်ကြီး များနှင့်သစ်ပင်ငယ် တို့ကို မှီတွယ် တက်ရောက်သော နွှယ်ပင် တစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟု တိုင်းရင်း သမားတော် အဌာရသ ဆရာသောင်းအား မေးမြန်း ရာတွင် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
ယခင်ကာလ တိုင်းရင်းဆေး ဌာနတွင် တာဝန် ထမ်းစဉ်က ကုသ ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ ထိုစဉ် အခါက ဟင်္သာတ ခရိုင် တိုင်းရင်းဆေး ကုဌာနမှ ခရီုင် တိုင်းရင်း ဆေးမှူးကြီးနှင့် မြို့နယ် တိုင်းရင်း ဆေးမှူးတို့ ဦးဆောင်၍ ခရိုင် တိုင်းရင်း ဆေးဆရာ အသင်းဝင် များသည် ဟင်္သာတ မြိုနယ်၊ နတ်မော် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးတွင် လေဖြတ် ဝေဒနာ ရှင်များအား ကျောက်သဗြက် အသီး အညွှန် များကို စားသုံး စေခြင်းဖြင့် ကုသရာ ဝေဒနာ ပျောက်ကင်း ချမ်းသာ လာခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ အပြင် ကျောက် သဗြက် သီးသည် အဆီကျ စေနိုင်ခြင်းနှင့် သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ နှလုံး၊ စသော ရောဂါများ သည်သာ မကပဲ ကင်ဆာရောဂါ ကိုပင် ပျောက် ကင်းအောင် ကုသနိုင် ခဲ့ကြောင်း၊ သိရှိ ရပါ သဖြင့် ကင်ဆာရောဂါ အပါအ၀င် အခြားသော ရောဂါ များကိုပါ နိုင်နင်းလှ ပါသော လွယ်လင့် တကူ ရရှိနိုင်သည့် ကျောက် သဗြက် ဆေးစွမ်းကို ဟင်္သာတသူ၊ ဟင်္သာတသား များနှင့် တကွ အခြားသော လိုအပ်သူများ သိရှိနိုင် စေရန် ရေးသား တင်ပြ လိုက်ပါသည်။
ကင်ဆာရောဂါ ဝေဒနာရှင် များသည် ထိုကျောက် သဗြက် ပင်မှ အစေ့တို့ကို စားသုံးပေးခြင်းနှင့် ဝေဒနာ ဖြစ်ရာသို့ လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် သတ်မှတ် ထားသော
ရက် အတွင်းဝယ် သိသိသာသာ သက်သာ လာပါလိမ့်မည်။ အရွက် အညွှန့်တို့ ကိုလည်း အကူဓါတ်စာ အဖြစ်စားသုံးပေး ရပါမည်။
အပြည့်အစုံ သိရှိ လိုပါလျှင် အောက်ဖော်ပြပါ ဆရာကြီး ထံသို့သာ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင် ပါသည်။ ကင်ဆာရောဂါ ပျောက်ကင်းသည့် ကျောက် သဗြက် အကြောင်းအား ဖြေကြား ပေးပါရန် အကူအညီ တောင်းခံရာတွင် စိတ်ရော ကိုယ်ပါ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေး ပါသော တိုင်းရင်း သမားတော်ကြီး အဌာရသ ဆရာသောင်း အား ကျေးဇူး အထူး တင်ရှိ ပါသည်။
ဆရာကြီးသည် န၀ဓုတင်င်္ဂါစာရ မဟာထေရ်၏ အပါးတွင် အလုပ် အကျွေးပြု ကုသိုလ် ယူနေလျှက် ရှိပါသည်။ အသေးစိတ်အား သွားရောက် မေးမြန်း စုံစမ်း လိုပါလျှင် တိုင်းရင်း သမားတော်ကြီး အဌာရသ ဆရာသောင်း၊ ဓုတင်ဆောင်၊ မဟာစေတျာ ရာမဘုရားကြီး ကျောင်းတိုက်၊ ဟင်္သာတမြို့သို့ သွားရောက်
ဆက်လက် မျှဝေပေး ပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံ အပ်ပါသည်။
(ကင်ဆာရောဂါ ဝေဒနာဆိုးမှ လူသားတိုင်း ကင်းလွတ်နိုင် ကြပါစေ။)
By : ကိုကွန်း